ထောက်ခံသူအုပ်စုများ MLS သည့်နိုင်ငံရေးအရိပ်လက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ ထောက်ခံသူ "အဖွဲ့များ, MLS သည့်နိုင်ငံရေးအရိပ်လက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်
ထောက်ခံသူအုပ်စုများ MLS သည့်နိုင်ငံရေးအရိပ်လက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်
ထောက်ခံသူများအုပ်စုများနှင့်လွတ်လပ်သောထောက်ခံသူကောင်စီ၏တစ်ဦးကသုံးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအချက်ပြ၏တားမြစ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ဘုံမြေပြင်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်စက်တင်ဘာလ 19 အပေါ် Las Vegas မှာအဆိုပါ MLS ထံမှတာဝန်ရှိသူများကတွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ် လိဂ်နှင့်သံတပ်ဦးသင်္ကေတများအထူးသဖြင့်တားမြစ်။
ဆီယက်တဲလ် Sounders, မြစီးတီးထောက်ခံသူများ (လိမ်လည်မှုများ) နှင့် Gorilla FC အသင်းမှမိမိတို့ counterparts တွေကိုနှင့်အတူလက်ပံသစ်, ထောက်ခံပါတယ်သောကျွန်းသစ်ကြည်းတပ်, ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့်အတူသဘောမတူ ။ အဆိုပါ MLS ပရိတ်သတ်များအဘို့အမူအကငျြ့မြား၏ code ကိုမှအပြောင်းအလဲများကိုကြေညာခဲ့သည်အခါရာသီကစပြီး ။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများကို MLS မူဝါဒများစဉ်းစားကြောင်းအားကစားကွင်း၌ပုပ္ပနိမိတ်၏တားမြစ်ချက်များပါဝင်သည်။
- Carlisle က MLS အတွက်ပွဲစဉ်နိုင်ငံရေးပိုစတာအပေါ်ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်ကြသည်ကြောင်းကဘာလဲ?
အဆိုပါသင်္ကေတ 1930 နှစ်ပေါင်း၏ရှေ့ Anti-နာဇီရှိတဲ့လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးပြန်စတငျရ။ ဒါဟာ Providence ပန်းခြံမှာအနည်းဆုံး 2017 အတွက်ကျွန်းသစ်ကြည်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ သို့သော်ဤသင်္ကေတ Antifa (Anti-ဖက်ဆစ်) ကအသုံးပြုသည်နှင့် MLS နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကက Antifa စဉ်းစားသောကွောငျ့, ကက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အလံသို့မဟုတ်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေအပေါ်သံတပ်ဦး၏သင်္ကေတကိုဖေါ်ပြဖို့တားမြစ်ထားသည် ပရီးမီးယားလိဂ်။ Antifa နှင့်လက်ျာစွန်းရောက်အုပ်စုများကိုတစ်ခါတစ်ရံအကြမ်းဖက်လှည့်သောအနောက်မြောက်ပိုင်းပစိဖိတ်ဒေသအတွက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများအတွက်စေ့စပ်ပါပြီ။
အဆိုပါအုပ်စုသုံးစု [သည့်သစ်နှင့် Sounders 23 သြဂုတ်လအကြားချန်ပီယံဂိမ်းထဲမှာတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းခဲ့ကြ သူတို့ 33 မိနစ်အတွင်းအသံတိတ်ဆန္ဒပြဖွဲ့စည်းဘယ်မှာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆန္ဒပြပွဲများတားမြစ်။ ဂိမ်းနာရီမသာမှ 33h00 ဒဏ်ခတ်ပြီးတာနဲ့နှစ်ခုပန်ကာအုပ်စုများချီးကျူးဖို့စတင်ခဲ့သော်လည်း, သူတို့သည်လည်းသံမျက်နှာစာမှာများစွာသောနဖူးစည်းစာတမ်းတွေပြသလိုက်ပါတယ်။
"အထွေထွေသတိပေး။ " ဒါပေမယ့်အလံနောက်တဖန်တစ်ပါတ်အကြာတွင်သည်ထင်ရှားကြသည်သောအခါ, ကျွန်းသစ်နှင့်ရီးရဲလ် Salt Lake အကြားဂိမ်းကာလအတွင်း MLS နှင့်နေအိမ်ရုံးကျွန်းသစ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် သုံးဂိမ်းအတွက်ကျွန်းသစ်တပ်မတော်အဖွဲ့ဝင်များ၏ "လက်တဆုပ်စာ" တားမြစ် .
အဆိုပါ CSI ကြောင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအစောပိုင်းကတွစ်တာမှတဆင့်ကြေညာခဲ့သည် အစည်းအဝေးစက်တင်ဘာလ 19 အပေါ်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ။ သီးခြားကြေညာချက်ထဲမှာ, ဘုတ်အဖွဲ့ 107ist, ကျွန်းသစ်တပ်မတော်စည်းရုံးရေးကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေအိမ်ရုံးသစ်, အဖြစ်ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ သူတို့အမှုကိုစေနိုင်ရန်အတွက်အသိုင်းအဝိုင်း။
"ဟုအဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်ရပ်ရွာကိုယ်စားလှယ်များကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထိုသူတို့အဘို့ကိုဆိုလိုဘာကြောင့်ယနေ့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာသည်, သံတပ်ဦး၏ပုံရိပ်များအပေါ်သမိုင်းသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ခဲ့ကြပြီးမကြာခဏအဖွဲ့ဝင်များကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြ ရပ်ရွာအဖြစ်ရှေ့သို့ရွေ့လျားများအတွက်အကြံပြုချက်များ "ဟုကြေညာချက်ကဆိုသည်။ "ဟုအဆိုပါကျွန်းသစ်၏ဧည့်ခံဆှေးနှေးနှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များ၏ပံ့ပိုးမှုများအလွန်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ "
အဆိုပါကြေညာချက်ကိုလည်းကျွန်းသစ်ကြည်းတပ်ကြောင်းထင်ရှားနှင့်လိမ်လည်မှုများကို Gorilla FC အသင်းကိုယ်စားလှယ်များအထက်ပါအစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်။ Las Vegas မှာအရပျကိုယူပါ။
အဆိုပါကြေညာချက်တွင်ထည့်သွင်း: "စစ်တပ်ကကျွန်းသစ် / 107IST စိတ်ရင်းမှန်နဲ့အားလုံးတိုင်ပင်ထိခိုက်နစ်နာအုပ်စုများအတွက်ကြောင့်အမှန်တကယ်အားလုံးပါဝင်နိုင်စေသကဲ့သို့ဤသူတို့အစည်းအဝေးများကိုလိဂ်ကငျြ့ code ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ နှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ။ "
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/major-league-soccer/story/3940784/supporters-groupsmls-to-talk-political-signs
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Moukandjo: "ဒါဟာအထက်တန်းလွှာကိုရှာဖွေထိုက်ကြောင်း, ထရှိဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်တဲ့ကလပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ကို excites သောဤစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ် ... "